Mareykanka oo ku hungoobay in uu madaxweyne u aqoonsado hoggaamiyaha mucaaradka Fensuweella - Halbeeg News
Mareykanka oo ku hungoobay in uu madaxweyne u aqoonsado hoggaamiyaha mucaaradka Fensuweella
Madaxwaynaha Venezuela Nicholas Maduro
WASHINGTON (HALBEEG)- Dowladaha Ruushka iyo Shiinaaha ayaa kasoo horjeestay mashruuc ay hor kaceysay dowladda Mareykanka kaasoo la hor geyn lahaa golaha ammaanka Qaramada Midoobay.
Mashruucan ayaa taageere loogu raadinayay baarlmaanka Venezuella oo aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaaby ee Juan Guaido oo Arbacadii ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha dalkaas iyada oo uu wali kursiga ku fadhiyo madaxweyne Nicoloas Maduro.
Wakaaladda wararka AFP ayaa kasoo xigatay rag diblomaasiyiin ah in gabi ahaanba mashruucaasi la baabi’yay. Ruushka ayaa wada hannaan kale oo lagu furayo wadahadal siyaasadeed ka billowda Venezuella taasoo Mareykanku uu arko wax aan la qaadan Karin.
Kulan deg deg ah oo uu yeeshay golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayuu wasiirka arrimaha dibbada Mareykanka, Mike Pompeo uu ku sheegay in hoggaamiyayaasha taageraya Maduro ay yihii kuwo dalkooda aysan ka jirin dimoqraadiyad .
Dhanka kale danjira dowladda Ruushka u fadhiya Qaramada Midoobayay, Vasily Nebenzya ayaa ku eedeeyay afgambiga Venezuella in uu ka dambeeyo Mareykanka taasoo uu ku tilmaamay in mar marsiiyo looga dhigtay wax aan maangal ahayn.
Safiirka ayaa sheegay in golaha ammaanku uusan xaq u lahayn fara galinta arrimaha gudaha ee Venezuella.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, Sergey Lavrov oo ka hadlay arrinta ka taagan dalka Venezuella iyo mowqifka dowladdiisa ayaa sheegay in siyaasadda dalka mareykanka ee ku aaddan Venezella ay tahay mid wax bur burineysa Ruushkuna uu aad u diiddanyahay.
Arbacadii markii Guaido uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha Venezulla ayay isla markiiba dowladda Mareykanka aqoonsatay.
Shir jaraa’id oo uu qabtay madaxweyne Maduro ayaa waxa uu ku sheegay in uu mar walba diyaar u yahay in wadahadallo ay u billowdaan isaga iyo hoggaamiyaha mucaaradka.
Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in ay si buuxda u gacan siin doonaan baarlamaanka Venezuella aqoonsanna doonaan hogaanka cusub ee dalka haddii aanan doorasho degdeg ah loo dareerin maalmaha soo socda.
Madaxweyne Maduro oo taagere xoog badan ka heysta ciidamada millatariga dalkiisa ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay u diyaar garowday dagaal hubeysan wuxuuna intaa ku daray in ay dajiyeen qorshe dagaal oo ay gacanta ugu dhigayaan magaalo walba oo dalkaas ka mid ah.
Shirkadda Facebook oo mideeyneysa WhatsApp, Instigram iyo Messenger
RW Itoobiya ayaa kula dardaarmay madaxda deegaanka Soomaalida iney u midoobaan dhibaatada gobolka